Ngayiphi i-Amazon yegama elingundoqo lokufumanisa ithuluzi onokuyinconyayo?
Ukuqhuba uphando olusisiseko lwegama eliphambili lubaluleke ngokubalulekayo kwiintengiso zakho zee-Amazon, njengoko kukusingatha isicwangciso esifanelekileyo kwi-Injini ye-Injini yokuSebenza. Ngokungaqinisekanga, wonke umthengisi ophumelelayo we-ecommerce kufuneka abe neyona nto ebonakalayo ye-Amazon keyword finder tools ukudibanisa kunye iqhinga lokuthengisa ngokwenene. Ukuxhomekeka kuphela kwi-data yangempela yabantu kunye nokusebenza ngokukhawuleza ukulungiselela amaphepha akho emveliso ukuze kuphuculwe ukukhangela kwi-intanethi - nantsi eyenza ukuthengiswa kwempahla ye-intanethi nganye - vps host. Ngaloo ndlela, ngezantsi ndiya kuluhlula ezinye zezona zinto zihamba phambili ze-Amazon kunye negama lophando - ukuba uhlale uhlaziywa kwaye uqhubeke uqhuba isinyathelo esinye phambi kwabaqhubi bakho abasondeleyo.
I-AmzSuite - yi-software ye-keyword ye-finder eyona nto inokukunceda kakhulu ukwazi konke malunga nemveliso ethengiswa kakhulu Abathengisi abaPhambili, iimpawu eziphakamileyo eziphezulu, kunye nokukhishwa okutsha okutsha. I-AmzSuite inezinto ezingama-67 zamaqela angama-67 (ama-Amazon UK kunye nama-Amazon ase-Amazon) kwaye iya kulungelelanisa ibhizinisi elikhulu le-ecommerce, kunye neengcali eziqeqeshwe kakuhle kwi-SEO. Ewe, kunikezelwa ukuba banenhlanhla ukukwazi ukwenza ezininzi kwi sixhobo ezinamandla ezinjalo.
I-Kparser - enye ithuluzi lokufumana igama elingundoqo le-Amazon, ngeli xesha ngendlela eyiyo. Into yokuba i-Kparser inokuxhasa abadayisi bokuthumela umgca wokuhambisa umgama kunye negama eliphambili eliphambili kunye neengcebiso zebakala eziphambili zelona. Ukuqokelela idatha echanekileyo kunye neefayile eziphuculweyo, olu khetho lukhethi olukhethekileyo lwabo bathengisi abasenokuba nezinto ezininzi zokwenza. Ndiyithetha into ekhethekileyo ye-Kparser yinkqubo elula yokuchofoza ukulawula, ukuhlunga, nokuhlenga iziphumo zakho ezinokuthi zigqitywe ngokukhawuleza malunga nesivinini sokukhanya.
I-MerchantWords - yintsimbi yesithathu yokufumana i-keyword ye-keyword, ngaphandle kweetyenziswe ngabaphathi abathengisa phezulu iiplani zeecommerce. Isixhobo seMarchantWords sinesiseko esikhulu seenkcukacha ezingaphezulu kwezigidi ezili-170 ze-Amazon ezikhethiweyo ezisetyenziswa ngabathengi bokwenene ekuthengeni kwansuku zonke. Phakathi kwamanye amanqanaba anamandla alo mncedisi we-intanethi, ndingathanda ukugqamisa ukuba kuya kuba sisisombululo esifanelekileyo ngokukodwa kubantu abanamava angaphantsi okanye nabathengisi bokuthumela umgangatho wokuthutha - akukho zakhono ezinamandla kwi-SEO efunekayo ukwenza ezininzi uphando lwegama elingundoqo kunye nokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwoluhlu lwemveliso lokubulala.
I-Keyword Tool Dominator - iza njengeyokugqibela ekhethiweyo igama elikhethiweyo ukuba libalwe namhlanje. Abantu bathi igama leso sixhobo lithetha ngokwalo - njengoko kunabasebenzisi abangama-15 abemi abaxhomekeke kwi-database yegama elingundoqo ukuze bathuthukise ukuthengisa kwabo, baze bafikelele phezulu nakwezinye indawo, umzekelo kunye nesiteshi somntu kwiGoogle. Ngoko ke, ukuba ufuna ulwazi oluchanileyo kuphela, ngoko kufuneka ufumane i-Keyword Tool Dominator yakho ye-stop-shop-jonga nje i-akhawunti yayo eyisisiseko mahhala, kwaye ujonge ukujoyina uluntu ngeenguqu ezipheleleyo ze-fat efumanekayo kwinto engama-dollar angama-50 .